Alefa Mivantana Amin’ny Media Nomerika Ao Meksika Ny Rio 2016, Fatiantoka Ho an’ny Fahitalavitra Misokatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2016 6:37 GMT
Fanokafana ny Tanàna Olaimpika #Río2016. Sary avy amin'ny mpisera mpisera Flickr CONADE. Nampiasaina ambanin'ny lisansa CC 2.0
Sarin'ireo Meksikana mpankafy fanatanjahan-tena tao amin'ny Flickr nozarain'i James Willamor. Lisansa CC 2.0
Mandritra izany fotoana izany, nanondro ny dolara an-tapitrisany maro tafiditra amin'ny paikadin'i Slim ny Forbes:
Ity zava-baovao amin'ny fampitàna ny Lalao Olaimpika ity dia natao ho an'ny vahoaka Amerikana Latina rehetra, fa tsy i Meksika ihany, satria ahitana orinasan'Atoa Slim ao amin'ny firenena 16 ao Amerika Afovoany sy Atsimo. Tamin'ny antsafa amin'ny gazety Meksikana an'aterineto La Jornada, nilaza ny solontena iray hoe:
Amin'itony lalao olaimpika itony, dia mety ho very vahana ny mpandray anjara amin'ny fampitam-baovao mahazatra raha mizotra araka ny nantenaina ny sehatr’ilay mpanankarembe Carlos Slim. Ao Meksika manokana, vitsy no nisalasala rehefa niala tamin'ny famoaham-baovao goavana ilay mpandraharaha hafa, Jorge Vergara, ka namoaka sehatra iray, ChivasTV, natao manokana ho an'ny ekipany amin'ny baolina fandaka. Andro vitsy taorian'ny nanombohany, nisedra olana ara-teknika maromaro izy io, ka niteraka fahasorenana tamin'ny mpijeriny. Ny zavamisy, efa nampiasa ny Twitter ny mpiserasera Nelson Ned Stark hiampangana ireo tsi-fetezan-javatra hitany ao amin'ny sehatr'i Slim :
Ry @ClaroSports ô! tsy mitsahatra ny manao #ChivasTV amiko ny fampitana avy aminareo nefa isika ity vao manomboka… Tsy ho afaka ny hahita na inona na inona aho raha mitohy izao.